စက်တင်ဘာလ 2018 - 💌 WebTK - သင်၏လက်မှတ် WebTalK 🚀, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သတင်း & ပိုပြီး Invite 🔥
တစ်လ: စက်တင်ဘာလ 2018
Webtalk 2018-09-30-3 - RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို
ဧပြီလ 22, 2019 စက်တင်ဘာလ 30, 2018 by Webtk.co
10 WEBTALK သင်သိထားဖို့လိုအဖြစ်မှန်က:
1) ကြှနျုပျတို့ Beta ကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင် Webtalk'' s ကို Beta စမ်းသပ်သူများ🙂
2) Webtalk သငျသညျပိုကောင်းအဖွဲ့အစည်းကတဆင့် Controller, နောက်ကျော, ကမ္ဘာကြီးကိုပေးရ built ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: Dropbox ကို, Facebook က, လည်ပတ်မှုစနစ်များ, ဓာတ်ပုံဝေမျှခြင်း, Reddit, လူမှုသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့, ဆိုရှယ်မီဒီယာ, social networking န်ဆောင်မှုများ, Software များ, universal ကို Windows ပလက်ဖောင်း apps များ, အသုံးဝင်မှု, Webtalk စတော့အိတ်, Webtalk'' s ကိုဘဏ္ဍာရေး, အင်တာနက်မှလမ်းခွဲ မှတ်ချက် Leave
Webtalk 2018-09-30-2 - RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို
***WEBTALK *** အသိပေးစာ upgrade & ကျချိန်
ယခုတပတ်ကျနော်တို့ဖြန့်ချိနေကြပါတယ် Webtalk အလွန်ကြီးမားတဲ့လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်သော Beta ကို v2.14 (ဖွယ်ရှိဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ။ ကျချိန်၏တိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏရှိလိမ့်မည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: အာမခံ, ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းမိသားစုများ, ခရစ်ယန်ဘာသာ, စိတ်ခံစားမှု, သည်းခံခြင်း, ပရို, ဝိညာဉျ, အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု, ပါရမီ, Webtalk နည်းပညာကို မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-09-30
WEBTALK UPDATE: အပေါ်ငွေရှာဖို့နဲ့အခြားနည်းလမ်းများဖြစ်ရှိသွားလျှင်မကြာသေးခင်ကအသုံးပြုသူများတွေအများကြီးကိုတောင်းဆိုနေတာပြီ Webtalk ဝင်ငွေထက်အခြား ဝင်ငွေ ရည်ညွှန်းကနေရှယ်ယာ။
သငျသညျကိုမကျင့်နေစဉ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: မိုဃ်းတိမ်ကို applications များ, computing, ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ, e-commerce, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ပွင့်လင်း access ကို, paywall, ရည်ညွန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, Software များ, ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် Software များ, Webtalk အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး, Webtalk ဘဏ္ဍာရေးစီးဆင်းမှုများ, Webtalk'' s ကိုလမ်းပြမြေပုံ မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-09-29
ဧပြီလ 22, 2019 စက်တင်ဘာလ 29, 2018 by Webtk.co
source: https://www.webtalk.co / n / 77810 ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေး, မာတိကာ, အထောက်အထားဆက်စပ်မှု, Suricata, Webtalk'' s ကိုလမ်းပြမြေပုံ မှတ်ချက် Leave
Webtalk 2018-09-28-4 - RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို
**WEBTALK USER မှအကျိုးကျေးဇူးရလဒ်ရယူ vs BETA USER မှ **
>>> USER မှအကျိုးကျေးဇူးရလဒ်ရယူ (Beta ကိုစမ်းသပ်အပြီး):
အဘယ်သူမျှမ bug တွေ / အားနည်းချက်တွေကိုမှ * Little က
* ဖြည့်အပြီးရည်ညွှန်းအပေါ်ဘဝကိုအဘို့အ 10% အခွန်ဝေမျှမယ်ရယူနိုင်သော ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: အင်တာနက် privacy, လူမှုသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့, ဆိုရှယ်မီဒီယာ, universal ကို Windows ပလက်ဖောင်း apps များ, Webtalk'' s ကို Affiliate Program ကို မှတ်ချက် Leave
Webtalk 2018-09-28-2 - RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို
အဆိုပါအမြီးအမောက်တောင်သေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှို့ဝှက်လက်နက်တွေဖြန့်ချိကြပြီမဟုတ်ပါ! 🙂 Webtalk နောက်နှစ် #1 လိမ့်မည်!
source: https://www.webtalk.co / n / 72864 ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: ပြဇါတ်, ထူးအိမ်သင်, အမျိုးအစား, Humanities, ဟာသ, အမြီးအမောက်, အကွောငျး, Webtalk စာရင်းအင်း, Webtalk'' s ကိုလျှို့ဝှက်လက်နက် မှတ်ချက် Leave
Webtalk RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို - 2018-09-28
WEBTALK UPDATE: ကျနော်တို့အပြည့်အဝ gmail ကနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဂုဏ်သတင်းကိုဆယ်ယူခဲ့ကြပြီးယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်တွေကိုစပမ်သွားလိမ့်မသငျ့သညျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိတ်ခေါ်အီးမေးလ်များနေဆဲ "ပရိုမိုးရှင်း" ကိုသွားပါ, သို့သော်ဖြစ်နိုင်သည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: Webtalk'' s ကိုလမ်းပြမြေပုံ မှတ်ချက် Leave
Webtalk 2018-09-27-3 - RJ Garbowicz ခြင်းဖြင့်သတင်းများ Update ကို
ဧပြီလ 21, 2019 စက်တင်ဘာလ 27, 2018 by Webtk.co
ကုမ္ပဏီများသည် "သုတေသန" ပေါ်တွင်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာသုံးဖြုန်းဒါကြောင့်, ဖွင့် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Webtalk သတင်း Tags: က်င့္၀တ္မ်ား, အသက်တာ၏ဒဿန, Webtalk အသင်းအဖွဲ့, Webtalk'' s ကိုသမိုင်း မှတ်ချက် Leave
12... 10 လာမည့်→